OMN: (Fulbaana 23, 2020) Birriin Itiyoophiyaa inni haaraa, dogoggora maxxansaa – Kichuu
[ April 23, 2021 ] WOW! እንግድህ በሀያ አንደኛው ክፍለ ዘመን እዲህ የሚአስብ ድንጋ እራስም አለ:: “ወለጋን ኬኛ” ይላሉ ጎረቤቶቻችን:: አያስቅም?	Videos
[ April 23, 2021 ] Hidhamtoota Mana Hidhaatii Baasuun Ajjeesuun Hatattamaan Dhaabbachu Qaba! (Ibsa KDHSLO – Ebla 23, 2021)	News
[ April 23, 2021 ] Ethiopia: A nine-point plan to restore stability	Africa
[ April 23, 2021 ] U.N. Security Council, for first time, declares concern about Ethiopia’s Tigray	World
[ April 23, 2021 ] When a jigsaw has a missing piece, it is not a jigsaw.	Africa
[ April 23, 2021 ] Father flees Ethiopia with babies around his neck	Africa
[ April 22, 2021 ] Ilaalchi Of-tuulummaa Sanymmaa Booddessaa fi Kufaa dha	News
[ April 22, 2021 ] Statement of MTA on the Prevailing Situation in Oromia	Africa
[ April 22, 2021 ] Flourishing Oromummaa – The Unstoppable Oromo Journey	Africa
[ April 21, 2021 ] Ethiopia rights commission said armed group has ‘taken control’ of county	Africa
HomeAfaan OromooNewsOMN: (Fulbaana 23, 2020) Birriin Itiyoophiyaa inni haaraa, dogoggora maxxansaa
OMN: (Fulbaana 23, 2020) Birriin Itiyoophiyaa inni haaraa, dogoggora maxxansaa
Akkasumas ammoo doggoggora saxaxaa qabaachuun isaa gaaffii kaase.
Birriin Itiyoophiyaa waggoota 20 oliif tajaajile, abbaa 10, 50fi abbaan 100 jijjiiramuudhaan Noottaa haaraa abbaa 200 dabalatee saxaxni haaraan hojjetamee raabsamaa kan jirudha.
Seerota Noottaa Qarshii Baankilee Addunyaa irratti tumamanii jiran keessaas, dogoggoroonni xixiqqoon Saxaxa waliin wal qabatan Maallaqa irratti yoo mullatan maallaqicha hojiin ala gochuu waan danda’aniif of eeggannoon murteessaa ta’uutu himama. Keessattuu, rakkoowwan lakkoobsa Maallaqaa akkasumas gita maallaqaa waliin wal qabatan yoo jiraatan, rakkoo waldha’iinsa dinagdee uumuu malu jedhama. Birriin Itiyoophiyaa isa haaraa keessaa abbaan 100 rakkoo saxaxaa, fakkii leencaa achirratti mullatu, birriidhaa gara birriirti addaa addummaa kan qabuufi inni tokko achi siqee, kan biraa irratti ammoo ol siqee mul’ata.
Abbaan 200 ammoo gita maallaqichaa ibsuu irratti rakkoo maxxansaa kan qabu yoo ta’u, Afaan Ingiliffaatiin gitni maallaqaa seeraan kan hin qubeeffamne ta’ee, qubee “D” dhiisuun lakkoobsa “0” akka qubee “D”tti fayyadamame. Maddi rakkoon kana lamaaniis, xiyyeeffannoo dhabuu akkasumas ariitiin marii uummataa malee hojjetamuu isaati jechuun marsaalee hawaasummaarratti qeeqaaf saaxilameera. Hayyoonni dinagdees dhimmi kun yoo fooyya’uu baate, wal amantaa dhabuu Bitaafi gurguraa gidduutti uumuu waan maluuf, sochii daldalaaf guufuu ta’uu danda’a jechuun dubbataa jiru. Yeroo ammaa kanattis Birriin gosni tokkoo saxaxa addaa addaa qabaachuunsaa, shakkii maallaqa sobaati jedhu kaasaa jiraachuun isaa mullataa jira. Kanaaf Mootummaafi Baankiin Biyyaalessa Itiyoophiyaa dhimmicharratti ibsa ga’aa kennuu qabu jechuun marsaalee hawaasummaarratti mata duree dubbii ta’ee jira.
OMN: (Fulbaana 23, 2020) Qondaaltota ABO fi namoota biroo dabalatee, walumaa galatti nama 21’f manni murtii Olaanaa Godina Addaa Naannawaa Finfinnee mirga wabii kanaan dura Manni murtii Sulultaa murteessee ol iyyannoodhaan ittifamee ture mirkaneesseef.
Yaalii ajjechaafi oofkora qindeessuutiin shakkamaanii namoota hidhaman keessaa, Qondaaltota ABO dabalatee namoota 28’f kanaan dura manni murtii Bulchiinsaa Magaalaa Suluultaa mirga wabii Birrii kuma 25 fi kuma 7 tokko tokkoo isaaniif eeguunsaa ni yaadatama.
Haa ta’u malee, ajaja mana murtii diduudhaan poolisiin Oromiyaa shakkamtoota kana butuun mana hidhaa Buraayyuufi Sabbataatti gedderuun, ol iyyannaa gara mana Murtii Olaanaa Godina Addaa Naannawaa Finfinneetti fudhatee ture.
Manni murtii Olaanaa Godina addaas gaafa 3.13.2013 xalayyaa bulchiinsa mana Amala Sirreessaa Godinichaatti barreesseen, shakkamtoota kanarraa mirga wabii sarbuun akka mana hidhaa tursiifaman ajaja dabarsuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama.
Guyyaa har’aa garuu, manni murtii Olaanaa Godinichaa, murtii murteesseen, ol iyyannoo Abbaa Alangaa Godina Addaa Naannawaa Finfinnee kufaa gochuudhaan, mirgi Wabii namoota 28 Manni murtii Sulultaa eegee ture keessaa kan nama 21 akka mirkanaa’u jechuun, dhorkaa gaafa 3.1.2013 barreesse haquusaa ibsuun, hidhamtoonni siyaasaa kun akka hiikamaniif, xalayyaa gara bulchiinsa mana amala sirreessaa Gidina Addaatti ergee jira.
OMN: ቆይታ ከዶር አወል አሎ ጋር (Sept 23, 2020)
Addi Bilisummaa Hilton (Dammallaashonni) paartii amaaraa ABN waliin waliif mallatteesse
WOW! እንግድህ በሀያ አንደኛው ክፍለ ዘመን እዲህ የሚአስብ ድንጋ እራስም አለ:: “ወለጋን ኬኛ” ይላሉ ጎረቤቶቻችን:: አያስቅም?
Hidhamtoota Mana Hidhaatii Baasuun Ajjeesuun Hatattamaan Dhaabbachu Qaba! (Ibsa KDHSLO – Ebla 23, 2021)
Ethiopia: A nine-point plan to restore stability
U.N. Security Council, for first time, declares concern about Ethiopia’s Tigray
When a jigsaw has a missing piece, it is not a jigsaw.
Ilaalchi Of-tuulummaa Sanymmaa Booddessaa fi Kufaa dha
Statement of MTA on the Prevailing Situation in Oromia
Ethiopia rights commission said armed group has ‘taken control’ of county
U.S. sees no sign of Eritrean withdrawal from Tigray, urges pullout
Abadan Impaayera Itoophiyaa dhabamarraa humni hambsuu fi Oromiyaa walaba dhugoomsurraa humni nu dhaabu hin jiru.
Gootummaafi tokkummaa Kan Qeerroo Walloo Dursu Unuma Hin jirre!
POOLISIIN OROMIYAA Poolisii naannoo amaaraa ilaaltanii ammam of taajjabdu ykn of jibbitu ykn gaabbituu?? Qaroo Oromoo meeqatu harka keessanitti du’e?
OMN: Dhaddacha Dubbii — Nageessaa Oddoo (April 21, 2021)